Soo dejisan ImDisk Virtual Disk Driver 2.0.10 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariGubasho CD & DVDImDisk Virtual Disk Driver
Bogga rasmiga ah: ImDisk Virtual Disk Driver
Dareewalka ImDisk Virtual Disk Driver – waa qalab aad u wanaagsan oo lagu rakibo kumbuyuutarrada adag ee diskiga ah, diskiyada diskiga ah ama CD iyo DVD faylasha sawirka. Software-ka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku rakibto disk kombiyuutar ah RAM, sidaa darteed ka hortagga feylasha ku meelgaarka ah ee xiro nidaamka oo si joogto ah u gaabiyo shaqadiisa. Kahor intaadan ku rakibin disk-ga dhijitaalka ah, ImDisk Virtual Disk Driver wuxuu ku siinayaa inaad doorato goobaha lagama maarmaanka ah, oo ay ku jiraan cabirka, magaca disk, meeleynta jirka ama RAM. Ka hor intaadan rakibin disk-ga dhijitaalka ah, ImDisk Virtual Disk Driver wuxuu ku siinayaa inaad doorato goobaha lagama maarmaanka u ah, oo ay ka mid yihiin cabirka, magaca diskka, meeleynta xusuusta gelitaanka jireed ama si aan toos ahayn. Software-ka wuxuu taageeraa astaamaha si loo abuuro meel disk cusub, qaab, wax soo saar, ogeysiin khaladaadka, rakib meelaha keydka gaarka ah, iwm Waqtiga kombiyuutarka la damiyo oo xogta aan loo baahnayn lagu keydinayo RAM.
Abuurista diskka casriga ah ee RAM
Saameyn wanaagsan oo ku saabsan nidaamka guud ahaan xawaaraha
Abuurista saxanno qaali ah oo alaabada xamuulka qaada
Meelo farabadan oo dejyo iyo howlo ah
Soo dejisan ImDisk Virtual Disk Driver
Faallo ku saabsan ImDisk Virtual Disk Driver
ImDisk Virtual Disk Driver Xirfadaha la xiriira